eNasha.com - संसारकै खराब फायरम्यानहरू
संसारकै खराब फायरम्यानहरू
अर्काको घरमा लागेको आगो निभाउन जाने र अरूलाइ सुरक्षाको अनुभूत गराउनेहरूकै स्थानमा आगो लाग्यो र निभाउन गाह्रो भयो भने त्यस्ता फायरम्यानहरूलाइ तपाइँ के भन्नु हुन्छ ? अवश्य पनि राम्रो मान्नु हुन्न होला ।
जर्मनीमा पनि त्यहाँको आगो निभाउने एउटा समूहलाइ संसारकै खराब फायरम्यानका रूपमा पुरस्कृत गरिएको छ ।
त्यसो किन गरियो भने स्वयम् अग्निशमन केन्द्रमा आगलागी भयो । यो आगलागीमा ३० लाख पाउण्डभन्दा बढीको सम्पत्ति एकै छिनमा स्वाहा भयो । त्यहाँ कार्यरत २५० जना कामदारले पनि आगो नियन्त्रण गर्न सकेनन् भने छिमेक शहरबाट आगो निभाउने टोली आइपुग्नु पर्यो ।
अग्नि नियन्त्रण तालिम दिँदै गर्दा कुनै झिल्को उछिट्टिएर यो आगो चारैतिर सल्किन पुगेको अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वास गरेका छन् । तर अग्निशमन केन्द्रका अधिकारीहरूले विद्युत वायरिङमा भएको समस्याका कारण यो आगलागी भएको दाबी गरेका छन् ।
सन् १९९४ मा मात्र बनेको यो अग्निशमन केन्द्र निर्माण भएको लगत्तै आगलागीमा परेको थियो । त्यतिबेलाको आगलागीमा उति धेरै नोक्सान भएको थिएन, तर यस पटक त सम्पूर्ण कार्यालय र वाहनहरू ध्वस्त भएका छन् ।
यस्तो पनि ! माया सुन्दरी सेलेब्रिटी गुगल भव्यता इन्टरनेट नग्नता बलिउड मूर्ख्याइँ विज्ञापन मुद्दा मामिला श्रीमानश्रीमती फट्याइँ कीर्तिमान परिस्थिति हलिउड उपाय उदेकलाग्दो उदारता